‘सेल्फ मेड अन्टर्प्रेनर’ कस्ता हुन्छन् ? – HamroKatha
‘सेल्फ मेड अन्टर्प्रेनर’ कस्ता हुन्छन् ?
रिचर्ड ब्रान्सनको कथा
हाम्रो कथा २०७६ जेठ २४ गते १३:२७
तस्वीर : CNBC बाट
संसारमा तहल्का मच्चाईरहेको भर्जिन भन्ने एउटा ब्राण्ड छ । र यो हो भर्जिनका संस्थापक रिचर्ड ब्रान्सनको कथा I
रिचर्ड ब्रान्सनलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट ‘सेल्फ मेड अन्टर्प्रेनर’ भनिन्छ । कसरी एउटा सामान्य मानिस कालान्तरमा मेहनत र लगनसिलताले संसार जित्ने मानिस बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण हुन् ब्रान्सन ।
उनको जीवन कथालाई सारांशमा भन्नुपर्दा, हाइस्कुल फेल तर विश्वको ४ सयभन्दा बढि कम्पनिको मालिक भने पुग्छ । उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्नुको कारण उनी ‘डिस्लेक्सीया’ रोगबाट पिडित भएर पनि हो । यो एउटा यस्तो रोग हो जसले बालबालीकामा सिक्ने क्षमतामा ह्रास ल्याइदिन्छ ।
१६ वर्षको उमेरमा उनका शिक्षकले उनलाई ‘गरि खान नसक्ने’ भनेपछि विद्यालय त्यागेका उनले हाल ‘भर्जिन रेकर्डस्’ ‘भर्जीन मोबाइल’ ‘भर्जिन एट्लान्टिक एयरलाइन्स’ ‘भर्जिन रेलवेज्’ ‘भर्जिन मिडिया’ ‘भर्जिन डिजिटल’ ‘भर्जिन रेडियो’ ‘भर्जिन कमिक्स्’ गरि चारसय बढि कम्पनिको साम्राज्य खडा गरेका छन् । साथै उनको ‘भर्जिन ग्यालाक्टिक’ मार्फत अन्तरिक्ष पर्यटनमा समेत पाइला चाल्दै छन् ।
१८ जुलाई १९५० मा लण्डनमा जन्मिएका रिचर्ड ब्रान्सन सावधानी अपनाउनुमा होइन, वीर हुनुमा विश्वास राख्छन् । त्यसैले उनलाई सम्मानसाथ ‘सर’ भनेर सम्बोधन गरिन्छ र भनिन्छ ‘इङग्लिस विजनेस म्याग्नेट’ । सन् १९६६ मा ‘स्टुडेन्ट’ नामक पत्रिकाबाट थालेको उनको यात्रा धेरै उकाली ओराली गर्दै यहाँसम्म आएको हो ।
तर उक्त पत्रिका सफल हुन नसकेपछि, उनले सुरु गरेको ‘भर्जिन रेकर्डस्’ नै उनको पहिलो व्यवसायिक उडान मानिन्छ । उनले कम्पनिको नाम ‘भर्जिन’ राख्नुको पनि कारण छ, कारण उनी व्यापारमा सम्पु्र्णतयाः नयाँ थिए, कुमार थिए । तर पछि ‘भर्जिन एट्लान्टिक एयरलाइन्स’ लाई जीवित राख्न उनले ‘भर्जिन रेकर्डस्’ पनि बेच्न पुगे ।
उनी सफल हुनका पछाडि एउटा प्रमुख कारण छ, त्यो हो उनको ‘इनोभेटिभ आइडियास्’ । असफलतालाई पनि विश्वश्त भएर उनी सारा समस्या चिर्थे । जस्तो कि ‘भर्जिन एट्लान्टिक’लाई जोगाउन उनले ‘भर्जिन रेकर्डस्’लाई बेचेका थिए । हाल उनको कुल सम्पत्ति ४.९ विलियन डलर रहेको अनुमान गरिएको छ ।